Kopisha futhi unamathisele kungasebenzi ku-Mac? Sikufundisa ukuyixazulula | Ngivela kwa-mac
Kopisha futhi unamathisele kungasebenzi ku-Mac? Sikufundisa ukuyixazulula
UJavier Porcar | | Izifundiswa
Uhlelo lokusebenza lwe-Mac yethu lungesinye esitebeleni kunazo zonke. Noma kunjalo, alukho uhlelo olungenangqondo. Ngaphezu kwalokho, uma uqhubeka uvuselela inguqulo yakamuva, kungenzeka ukuthi lokhu kwehluleka kohlelo kungenzeka kulungiswe ngokuzenzakalela lapho ufaka leyo ngxenye enamaphutha.
Okunye ukwehluleka okulula, kepha okusikhathazayo, ngu lock emsebenzini wokukopisha nokunamathiselaNgakho-ke, ukwenza noma yimuphi umsebenzisi, usebenzisa lo msebenzi nsuku zonke. Uma yehlulekile kuwe nganoma yisiphi isikhathi, sizokukhombisa ukuthi ungayixazulula kanjani ngokushesha nangezindlela ezimbili ezihlukile, ukuze ukwazi ukukhetha eyodwa elula kuwe.
Okufanele sikwenze qala kabusha lesi sici, okungukuthi, kuphoqe ukuthi uvale uphinde uvule. Lesi senzo sixazulula cishe yonke ibhodi yokunameka enamathele noma ezinye izinkinga.
1 Inketho 1: Nge-Activity Monitor.
2 Inketho yesibili: NgeTheminali.
Inketho 1: Nge-Activity Monitor.
Kulokhu, sizoya kumqapha womsebenzi, otholakala ngaphakathi kwefolda yezinhlelo zokusebenza:
Kusuka ku Finder, kule ndlela elandelayo: Izicelo / Izinsiza, noma,
Kusuka Ukubukeka, ukufinyelela nge: Command + Spacebar nokubhala Umsebenzi Monitor.
Uma sekuvuliwe, ebhokisini lokusesha ngaphezulu kwesokudla, kufanele sibhale: ibhodi
Khetha inketho yebhodi bese uchofoza ku-X, engaphezulu kwesobunxele.
Inketho izovela, isixwayise uma sifuna ukumisa inqubo. Sizocofa ku "Phoqa ukuphuma"
Manje sesingakwazi vala umsebenzi wokuqapha.
Umsebenzi uvala ngokuzenzakalela uphinde uvule kabusha. Kufana nokuqalisa kabusha uhlelo, kepha kwalowo msebenzi kuphela. Manje hlola ukuthi ngabe umsebenzi "wekhophi nokunamathisela" usebenza kahle.
Inketho yesibili: NgeTheminali.
Ngalesi sikhathi, sizophinda isinyathelo sokuqala senketho yangaphambilini, kepha manje, sibheka kufolda yezicelo noma ku-Spotlight yohlelo lokusebenza: Isikhumulo.
Uma sekuvuliwe, sibhala: killall ibhodi.
Manje sesingakwazi ukuphuma kwesikhumulo.
Noma iyiphi yalezi zinketho ezimbili kufanele ilungise inkinga. Uma kungenjalo, qala kabusha.
Lesi sici asikhethi i-MacOS High Sierra kuphelaNgakho-ke, ungakusebenzisa noma ngabe une-MacOS yangaphambilini.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Kopisha futhi unamathisele kungasebenzi ku-Mac? Sikufundisa ukuyixazulula
Kusukela ukubuyekezwa kokugcina kokubona, ikhophi / ukunamathisela kuyekile ukungisebenzela. Ngizamile izindlela ezimbili ozisho .. kepha azingisebenzeli. Angazi ukuthi ngabe kukhona okwaziyo ngodaba lokuthi kungani ngalesi sibuyekezo sokugcina simile ukusebenza. Uma ikhona enye indlela, ngingayithokozela.
Noma yikuphi okukhethwa kukho okubili akusebenzi nakimi
Ukukopisha - ukunamathisela akusebenzeli nami ... ngizamile engikubhalile futhi akukho lutho, ngisebenzisa le miyalo ukusebenza osukwini lwami usuku nosuku futhi banginikeza izinkinga eziningi ....
UBelén Furtado kusho
Sawubona, imiyalo yokukopisha nokunamathisela evela kusibuyekezo sokugcina ayisebenzeli nami. Ngabe usitholile isisombululo salokhu?
Phendula uBelén Furtado
Sawubona, ayinginiki lezi zinyathelo, ngiyizamile kaningana futhi lutho ... SIZA usuku lonke ayifuni ukungishaya noma yini 🙁
UJuan Carlos Villalobos kusho
Noma yini! Akusebenzi.
Phendula uJuan Carlos Villalobos
Ingwazi ephelele! Ngaphuma ngenkani futhi kwasebenza ngokushesha! ngiyabonga ngokuphelele
Izinsika Zomhlaba, omunye umdlalo ofika kubasebenzisi be-Mac
Ungayisebenzisa kanjani ikhibhodi yeWindows nge-Mac